यी युवकले एकसाथ ६ प्रेमिकालाई बनाए ग’र्भवती ! – Gandaki Chhadke
यी युवकले एकसाथ ६ प्रेमिकालाई बनाए ग’र्भवती !
By गण्डकी छड्के Last updated Feb 13, 2021
एजेन्सी– एउटा रो’चक घ’टना बा’हिरिएको छ । ना’इजेरियाका प्रि’टी मा’इक नामक एक पु’रुषले एकसाथ आफ्ना ६ जना प्रे’मिकालाई ग’र्भवती बनाएका छन् ।उनी जहाँ जान्छन् वि’वाद उनीसँगै उ’ब्जिन्छ । उनी स्ट’न्टका राजा भन्ने उ’पनामले पनि प’रिचित छन् ।उनको खा’स नाम मा’इक इ’जी न्वा’ली न्’ओगु हो । गत नोभेम्बरमा अ’भिनेता वि’लियम्बस उ’चेम्बोको विवाह स’मारोहमा उनले आफ्ना ६ जना ग’र्भवती प्रे’मिकालाई सँगै ल’गेपछि यो बिषयले नि’कै च’र्चा पायो ।
वि’वाह स’मारोहमा आ’फुसँगै ल’गेका ६ जना ग’र्भवती प्रेमिकाको ग’र्भाव’स्थाको पेट उनले सु’म्सुम्याएको तस्वीर नि’कै भा’इरल बनेको थियो । यी ना’इजेरियन प्ले ब्वा’यले ला’गोस ना’इट क्ल’ब स’ञ्चालन गर्दछन् । उनी नि’कै धनी छन् र पैसा पनि म’नग्गे खर्च उनले आफू र आफ्ना ६ ग’र्भवती प्रेमिकाको तस्वीर इ’न्स्टाग्राममा पोष्ट गर्दै आफूहरु नि’कै उत्कृष्ट जीवन बि’ताइरहेको बताएका छन् ।यी ना’इजेरियन प्ले ब्वा’यले ला’गोस ना’इट क्लब’ स’ञ्चालन गर्दछन् । उनी निकै ध’नी छन् र पैसा पनि म’नग्गे खर्च गर्दछन् ।
साथै उनले निकै म’हंगा ब्रा’ण्डका क’पडाहरु प्रयोग गर्नुका साथै सु’पर कारहरु च’ढ्दछन् । जसका कारण यु’वतीहरू उनिसँग यु’वतीहरू न’जिकिन्छन् ।केही वर्षअघि ना’इजेरियाको राजधानीको सडकमा के’टीहरुलाई कु’कुरजस्तै घुँ’डा टे’काएर प’रेड खे’लाएको आ-रो’पमा उनी पक्राउ परेका थिए ।